रासायनिक औषधि को घरेलु दुरुपयोग: के तपाईंको बच्चाहरु लागूऔषधमा फसेका त छैनन्?
आफ्नो बच्चाको माया कस्लाई हुदैन? हामी हाम्रो सानो बच्चा बिरामी पर्यो भने डाक्टर कहाँ दौडाई हाल्छौं अनि दश थरिका औषधि खुवाउछौं। कतै बिरामीको बहानामा तपाइको बच्चाले औषधिको गलत प्रयोग त गरको छैन? कुनै औषधि टाउको दुखेको बहानामा ल्याएर खाएको त छैन? तल समावेश गरिएको औषधिहरुको लत लाग्न सक्छ, त्यसैले यसको प्रयोग गर्दा धेरै विचार पुर्याउनु पर्छ। आफ्नो बच्चाले कतै यी औषधिको दुरुपयोग त गरेको छैन? होस पुर्याउन जरुरी छ।
१. कोडीन(Codeine): खोकीको औषधिको रुपमा धेरै प्रयोग हुने यो औसधि अफिमको प्रकारमा पर्दछ। थोरै प्रयोग गर्दा खासै फरक नपरे पनी यसको धेरै प्रयोगले गर्दा लत लाग्न सक्छ। यसको प्रयोगले शरीरको दुखाई कम हुने हुन्छ तर बढी प्रयोग भएपछि सानो डोजले पुग्दैन र प्रयोग बढ्न जान्छ। धेरै ब्रान्डमा पाइने यो औषधि प्रति बोतलको रू १०० देखि माथिमा बजारमा पाइन्छन्। "मलाई खोकी मात्रै लागिरा'छ" भनेर पैसा मागेर खोकीको औषधिको आत्यधिक प्रयोग लतको निशानी हुन सक्छ। कोडीनको आत्यधिक प्रयोग गर्ने मान्छेमा निन्द्रा लागिरहने, रिंगटा लाग्ने, कब्जियत हुने देखि लिएर पेट दुख्ने, बान्ता लाग्ने, छिटो-छिटो सास फेर्ने, आदि लक्षणहरु देखा पर्छन।
२. भेलियम/बेन्जोडाइजिपिन (Valium/Benzodiazepine): चिन्तित मानसिकता(anxiety), मांसपेसी स्पाजम(spasm) तथा रक्सीको तलतल छुटाउन प्रयोग हुने यस औषधिले साधारणतया दिमागलाई शान्त बनाउन सहयोग गर्छ। औषधि पसलमा डाक्टरको प्रेस्क्रिप्शनबिना किन्न नपाइने यो औषधि कालो बजारमा सजिलै भेट्ने गरेको पाइन्छ। दिमागलाई शान्त पार्ने र अद्भुत आनन्द को अनुभूति दिने कारणले यो औषधिको बडी दुरुपयोग भएको पाइन्छ। बढी अलमल्ल हुने, चिडचिड़ो हुने, सानो सानो कुरामा पनि झर्किने, डीप्रेसन हुने, छालामा असर देखिने, आदि भेलियम दुरुपयोगको संकेत हुन सक्छ।
३. भिटामिन (Vitamin): शरीर तन्दरुस्त र बलियो बनाउन प्रयोग गरिने भिटामिनले पनि लागुऔषधको काम गर्न सक्छ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ। तर यसको धेरै प्रयोग गरियो भने शरीरले चाहिने भिटामिनहरु बनाउन सक्दैन र शरीरले बाहिरबाट पोषण माग्न थाल्छ जसले गर्दा यसको लत बस्न जान्छ। हामी हाम्रो शरीरलाई चाहिने भनेर जति पनि भिटामिन खान दिन्छौ तर त्यस्ले बच्चाहरुमा जरुरतको चाहना पैदा गर्न थाल्छ। भिटामिन को दुरूपयोग अरु लागूऔषध संग पनि हुन्छ। त्यसैले आफ्नो छोराछोरिहरुले धेरै भिटामिनको दुरुपयोग गरेका नगरेको अनुगमन गर्नु जरुरि छ।
४. केटामीन(Ketamin): उपचारको क्रममा बेहोस बनाउन प्रयोग हुने यो औषधि एउटा सशक्त लागुऔषध हो। यसको प्रयोगले मानिसलाई आत्यधिक रमाइलोको अनुभूति दिन्छ। यो औषधिको प्रयोग गर्दा आत्माले शरीर छोडेको अनुभूति हुने, शरीर नचल्ने तर बाहिरको सबै कुरा थाहा हुने हुन्छ। डाक्टरको प्रेस्क्रिप्शनबिना किन्न नपाइने यो औषधि भेटनरी सर्कलमा सजिलै पाइन्छ। शरीरको दुखाई कम गर्ने कारणले यो औषधि बढी नै दुरुपयोग भएको पाइन्छ। राम्ररी हिंड-डुल गर्न नसक्नु, बोली राम्ररी नआउने, बर्बराउने, आदि केटामीन दुरुपयोगको लक्षण हुन सक्छन्।
५. ट्रामाडोल(Tramadol): यो प्रकारको औषधि अफिमको औषधि प्रजातिमा पर्छ। यसको काम भनेको दिमागमा रासायनिक प्रक्रियालाई कम गरि दुखाई कम गर्ने हो। यस औषधिको प्रयोगले मान्छेलाई लत लगाउँछ किनभने यस्को प्रयोगपछि शारीरले आफुलाई चाहिने रसायनहरु बनाउन छोड्छ। अब त्यो रसायन शरीरलाइ चाहिएमा त्यसको तलतल लाग्छ। आँखाको नानी सानो हुने, बिस्तारै साँस फेर्ने, सधैं टोलाई रहने, शरीर चिसो र छाला रुखो हुने, आदि ट्रामाडोल दुरुपयोगको लक्षण हुनसक्छन्।
माथि उल्लेखित औषधिहरु त केहि नामहरु मात्रै हुन्। अरु यस्ता धेरै औषधिहरु छन् जसको दुरुपयोग भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले हाम्रो भावी सन्ततिले के-कस्ता औषधिको प्रयोग/दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा विचार गरिरहनु पर्छ। लागुऔषधको लत भनेको जुन पनि औषधिको हुन सक्छ, त्यसैले औषधिको बारेमा जानकारी लिएर सधैं सजग रहनु पर्छ।